Apple si iPhone X Ji Ya Bara Uru Mma Karịa bụla Previous iPhone - China Gracebestbuy International
Apple si iPhone X Ji Ya Bara Uru Mma Karịa bụla Previous iPhone
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta ihe iPhone na pụrụ ijide ya uru, lee dịghị ihe ọzọ karịa Apple si iPhone X.
Na a na-adịbeghị anya ọmụmụ, liquidation ụlọ ọrụ B-Stock enyocha nke iPhone ka nke kacha mma ọrụ nke na-ejide ya uru. The iPhone X wee si n'elu site retaining 85% of mbụ ya uru a abụọ ahịa. Ụlọ ọrụ ndị na ịzụta iPhone X ke nnukwu na resell na handset na-enweta ya maka 75% of ya retail price, B-Stock chọpụtara, dị ka 9to5Mac, nke nwetara otu ọmụmụ ihe ahụ.
Apple tọhapụrụ ya iPhone X afọ ikpeazụ na kasị elu price mkpado ọ mgbe Kaakwa a ụlọ ọrụ smartphone. The isi iPhone X nlereanya efu $ 999 na version na nchekwa na-aga n'ihi $ 1.149. The B-Stock data-atụ aro iPhone X bụ uru ọ dịkarịa ala $ 849,15 na Nregharị.
Smartphones adịghị a jide ha bara uru nke ọma. New atụmatụ, mma mmiri, ma na-adọrọ ndị asọmpi na-ụgbọala ha bara uru ala budata. Apple si iPhones nwere ihe yiri furu efu uru, ma, ha na-chere mma karịa ọtụtụ. Dị ka 9to5Mac, B-Stock si data na-atụ aro na iPhone X emenịm ọhụrụ ndekọ maka ejide ya uru mma karịa ihe ọ bụla ọzọ iPhone na ahịa.
The Nchoputa bụ kwesiri ozi ọma n'ihi na ụlọ ọrụ na-enweta eji ma ọ bụ laghachi iPhones. Ọ bụ na-ezi ozi ọma n'ihi na onye ọ bụla bụ onye nwere ihe iPhone X na na-eme atụmatụ na-atụgharị ya n'ihi a ngwaọrụ ọhụrụ nke afọ a. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla ọzọ, ọ ga-aga a ogologo ụzọ na defraying na-eri nke a ọhụrụ iPhone.
Post oge: Jul-30-2018